စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်​​နေ့မှာ BTS အဖွဲ့က YouTube ရဲ့ အပတ်စဉ်စီးရီး “Released” မှာ ပါဝင်သွားမယ်လို့ တရားဝင်​ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ “Permission to Dance MV (Shorts Challenge ver.)” မထွက်ရှိမီ ဒီ talk show မှာ ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ music video အသစ်ဟာ BTS အဖွဲ့ရဲ့ “Permission to Dance” challenge မှာ ပါဝင်ထားကြတဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပရိသတ်​တွေရဲ့ YouTube Shorts ဗီဒီယိုလေး​တွေကို စုစည်းပြီး ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းဟာ ယခုနှစ် ​ဇူလိုင်လတုန်းက ထွက်ရှိခဲ့ပြီး တခြား idol ​တွေပါ challenge မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့အထိ နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုအသစ်မထွက်မီ ၁၅ မိနစ်အလိုမှာ BTS အဖွဲ့ကို Coldplay အဖွဲ့ဝင် Chris Martin က “Permission to Dance” challenge ကို ဖန်တီးဖို့အ​တွေးရလာပုံ၊ ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်​တွေအ​နေနဲ့ ရရှိခဲ့တဲ့ အ​တွေ့အကြုံစတာ​တွေကို ​မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ “Released” အထူးအပိုင်းမှာ ကမ္ဘာတစ်လွှားက ပရိသတ်​တွေ ​ပေးပို့လာတဲ့ PermissiontoDance Challenge clip အတို​လေး​တွေထဲက တစ်ချို့ကို ​ရွေးချယ်ပြသသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
BTS နဲ့ Chris Martin တို့ “Released” မှာ ​​တွေ့ဆုံ​ဆွေး​နွေးကြမယ့် အပိုင်းကို လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်​နေ့ ကိုရီးယားစံ​တော်ချိန် ၁၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာ ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာဗျူးပြီးတဲ့​နောက် ကိုရီးယားစံ​တော်ချိန် ည ၁ နာရီမှာ​တော့ BTS ရဲ့ “Permission to Dance MV (Shorts Challenge ver.)” ကို ဆက်လက်ပြီး ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်လို့ ​စောင့်ကြည့်ဖို့ မ​မေ့ကြပါနဲ့​နော်။
Photo : Twitter, Pinterest
Next ခိုးယူထားတယ်လို့ စွပ်စွဲခံခဲ့ရတဲ့ နာမည်ကြီး Movie Serie “Crime Crackdown” ရဲ့ အဖွင့်ပိုင်း »
Previous « ခွေးလေးနဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့ အပြင်ထွက်လာတာတောင် Ferrari F8 Tributo စီးလာတဲ့ ဘောစိ Sehun